Nguva yechando musasa muCanada | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Flap Nguva yechando Camp
Rarama chando chakanakisa chehupenyu hwako
CHEMA CHETE Dzidza, Ongorora, Tsvaga & Kura
12 kuna 17
CHEMA CHETEDzidza, Ongorora, Tsvaga & Kura
Yese chirongwa cheKubatanidzwa chinokupa iwe chiitiko chakasarudzika, zvichikubvumidza iwe kuvandudza hunyanzvi hwako hwemutauro muChirungu kana chiFrench.
BLI FLAP nguva yechando musasa zvirongwa zvinopa chinonakidza chiitiko kunze kwenyika kusanganisa Chirungu neFrance kudzidza nezvimwe zvakasiyana zvinonakidza zviitiko munzvimbo yakachengeteka uye ine hanya.
Chinangwa chedu chinopfuura kungodzidzisa Chirungu neFrench. Tine chinangwa kupa vadzidzi vedu mukana wekuwedzera maitiro avo nekuita shamwari itsva kubva kumativi ose enyika.
Kureba uye Kutanga mazuva
Kureba: Mavhiki maviri kusvika masere
Zuva rekutanga: Zvita 13
Zuva rekupedzisira: Kukadzi 6th
Makirasi anozadzwa nemashopu. Ivo kurudzira kuzvimirira kwemitauro uye kushanduka. Kushanda nemumwe uye nevatungamiriri vewekishopu, vadzidzi vanopihwa chirongwa chekuti chipedzwe vhiki rega rega uye kuratidzwa neChishanu.
Vhiki rega rega tinopa mashopu akasiyana, sekuti:
Kutora mifananidzo kwedhijitari
Improv / Kuita
Mutauro kuburikidza nemumhanzi
Vadzidzi vanotora makumi maviri neshanu kana maFrench Zvidzidzo nevadzidzisi vane hunyanzvi.
Mabasa Ezuva Nezuva
Mabasa ezuva nezuva akarongeka kuitira kuti vadzidzi vagare vaine imwe inonakidza kuita.
Zviitiko Zvezuva Nezuva Muenzaniso
Old Montreal kufamba kwekufamba
chiumbwa chomufananidzo wenyika
Mune Residence Mabasa Muenzaniso
Ping pong kushanya
Isu tinopa vadzidzi mukana wekunzwa nyika nyowani munzira nyowani, kuwana zvinhu zvitsva, kuita shamwari nyowani uye kudzidzira hunyanzvi hwavo hweChiRungu / French hunyanzvi kunze kwekirasi. Chirongwa ichi chinosanganisira kushanya kwevhiki kupera kana zviitiko zviviri zvezuva rizere pakupera kwevhiki.
Pakati pevhiki vadzidzi vanowana nzvimbo, dzakadai se:
Vhiki Yekuenda Kunze Sampulu Muenzaniso (purogiramu inosiyana):
Ottawa (1 Zuva)
Quebec Guta uye Hôtel de Glace (1 Zuva)
Skiing (1 zuva)
Toronto, Niagara Falls (mazuva maviri kana matatu)
Kurubvu (1 zuva)
Zvokugara uye Homestay sarudzo zviripo.
Muchirongwa chedu chekugara, ma campers anogara kuEVO, pekugara kwemudzidzi anowanikwa maminetsi mashanu kubva pane yedu main kampasi.
Vagadziri vanokwanisa kuwana 24/7 rutsigiro pamwe nekutarisirwa kunopihwa nevashandi vane hushamwari vanozove vari kwauri iwe mukugara kwavo vese.
Mhepo-yakarongedzwa kaviri makamuri
Imba yekuwachira · $ $
Bhaisikopo uye Mutambo imba
Yedu yepamhepo chirongwa chinopa ma campers mukana wekunyudza ivo pachavo mutsika nemitauro yeCanada. Ivo vachararama chiitiko chemhuri. Dzedu mhuri dzese dzakasarudzika dzakanyatsosarudzwa uye dzinofanira kusangana nemhando yeBLI maitiro. Isu tinoona kuti dzimba dzose dzemhuri dzinotambira dzinosangana nedziviriro uye hutsanana uye vakafamba nenzira yakaoma yekusarudza.
Kana varidzi vemisasa vakatora chirongwa chedu chekumba, vanopedza zuva ravo na6: 00 pm uye vanonanga kumba kuti vadye pamwe nemhuri yavo, neyekufambisa yeruzhinji.
Zvekudya zvese zvichapihwa nemhuri. Munguva yemafambiro evhiki, vafambi vanozove nebasa rekuzvitenga zvavo zvekudya.
Vadzidzi vanopihwa matatu ehutano chikafu pazuva.
Kutarisira, kuchengetedza, uye kuchengetedzwa
Iyi nzvimbo yakadzidza yekudzidza
Zvidzidzo zveC24 zveChirungu kana chiFrench kwevhiki • Muvhuro kusvika Chishanu, inopiwa nevadzidzisi vanogona
Nzira dzokushandisa uye zviiti zvekubudirira
Mapoka maduku ane mazana e18 vadzidzi pakirasi
Hugaro • Zvokugara zvekugara uye zvekugara kwevanhu zvinowanikwa zvichienderana nevakasarudzwa
Chikwata chizere chekudya chirongwa chinosanganisira kudya kwe3 zuva nezuva, neine nzira dzakasiyana-siyana dzakakosha uye dzakanaka
Kunyatsotariswa zviitiko uye mafambiro - mashanu hafu yezuva mabasa mukati mevhiki uye maviri akazara mazuva Mugovera neSvondo
Nharaunda dzekutakura dzemunzvimbo
Kusashamwaridzana Nevashandi Vashoma • Vashandi veBLI vanotumira vadzidzi vaduku kuenda ku-airport kuti vaone kuti vanoenda zvakachengeteka